Ziyini amagugu amatshe ayigugu futhi ayigugu? Ezibizayo noma ezingabizi?
Amatshe amatshe ayigugu futhi ayigugu
Ngokwesayensi yezemvelo, kunezinhlawulo ezimbili zamagugu: amatshe ayigugu namatshe ayigugu amancane.
Kunamatshe ayigugu angu-4 kuphela
Amatshe ayigugu e-4 ayimayonnaise, i-ruby, isafire, ne-emerald.
Mayelana nemindeni ye-70 nezinhlobo ze-500 zihlukaniswa njengeziyigugu
Amagugu ahlukene we-betwin namanye amatshe yilokho asetshenziselwa ukwenza ubucwebe ngenkathi amanye amatshe engekho.
Ngokuphambene nalokho iningi labantu abakholayo, isizathu esisodwa nje sokuthi amatshe ahlukaniswa njengabalugugu ngumlando. Ngempela, mayelana neminyaka eyi-500 edlule, amandla alo mhlaba ayenesithakazelo kuphela kulawa manje amane. Ngaleso sikhathi, amanye amatshe ayengenanzuzo. Ngakho-ke singacabanga ukuthi kwakuyiwona amatshe afanekayo, ngaleso sikhathi futhi asele, kuze kube namuhla, amatshe ayewazisa kakhulu ngamandla.
Kwakufanekisela uphawu lomcebo namandla. Futhi kungenxa yezizathu ezifanayo ukuthi kusekhona, okwamanje, amatshe abizayo kakhulu.
Ngakho ayikho incazelo yesayensi. Kungenxa nje yomthetho wemakethe, noma umthetho wokuhlinzeka nokufuna.
Uzozwa ngama-opal "ayigugu", ama-tanzanites, ama-alexandrites namanye amatshe amaningi. Lokhu akulungile neze. Kepha kuyindawo yokuthengisa esetshenziswa abathengisi bamatshe ayigugu ukuheha amakhasimende, futhi engeze inani etsheni, ngethemba lokuthola inani elingcono lokuthengisa.
Iningi labathengisi bamatshe ayizazi ze-gemologists futhi kaningi bacabanga ukuthi bayazi ukuthi bakhuluma ngani, lapho bazi kuphela intengo yabo yokuthenga nentengo yokuthengisa abanethemba lokuyithola. Iningi labo alazi mehluko phakathi kwetshe lemvelo netshe lokwenziwa. Kuyamangalisa, akunjalo?
Kungakho kunamalebhu e-gemological aqinisekisa amatshe. Lokhu kukhulisa izindleko zomthengisi, kepha kusiza ukuthengisa.
Amatshe ayigugu futhi ayigugu ayigugu
Enye into engafanele ukuthi ama-gemstones ayigugu angokwemvelo ayabiza kakhulu. Eqinisweni, lokhu akulona iqiniso ngaso sonke isikhathi. Ngempela, idayimane, i-ruby, isafire noma i-emerald ingaba nemali engabizi kakhulu. Kuncike kwikhwalithi yabo. Ngenkathi enye ikhwalithi ephezulu amatshe ayigugu angadla ngaphezu kwalezi zinhlamvu eziphansi.
Ngamafuphi, amatshe ayigugu futhi ayigugu angabiza kakhulu noma angabizi kakhulu.
Uma unesithakazelo kulesi sihloko, ufuna ukuhamba kusukela kumqondo wokuzijwayeza, sinikeza izifundo ze-gemology.